Uncategorized | Waiyan's Blog
Twitter is nice place to announce breaking news inashort and concise manner. If you areablogger and you want your visitors to follow you on twitter, I will show you how to add twitter follow button to your wordpress blog. Advertisements
Ubuntu 13.04 မှာ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ကို suppor ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ netizens တွေ အများစုက ဇော်ဂျီနဲ့ပဲ မြန်မာစာ ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ယူနီကုဒ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မသုံးကြသေးခင် အွန်လိုင်းမှာ သူရေးတာ ကိုယ်မြင်ရဖို့ ကိုယ်ရေးတာ သူမြင်ရဖို့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ကီးဘုတ်က မဖြစ်မနေ သွင်းထားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်သွင်းချင်ရင်တော့ အွန်လိုင်းကနေ ဖောင့်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး /usr/share/fonts folder အောက်ကို ရွှေ့ထားလိုက်ပါ။ permission မရှိရင် sudo command သုံးဖို့လိုပါတယ်။ sudo mv <<zawgyi-font>> /usr/share/fonts Browser မှာ font setting ကို Zawgyi One ပေးလိုက်ရင် […]
Web Design မှာ navigation bar မှာပဲ ဖွဈဖွဈ content area မှာပဲ ဖွဈဖွဈ block တှရေဲ့ corner တှကေို လေးထောငျ့ကကြထြားတာထကျ နညျးနညျးလေး ဝိုငျးထားတာက ကွညျ့ရတာ ကြှနျတျောအမွငျမှာ ပိုပွီး အဆငျပွတေယျလို့ ထငျတယျ။ အရငျ css version တှေ တုနျးက nested div တှသေုံးရတယျ။ ဒေါငျ့အဝိုငျးလေးတှကေိုလညျး ၄ခုလောကျဖွတျထားရပါတယျ။ ဒါကိုမှ div tag ထဲမှာ nested လုပျပွီး ထညျ့ရပါတယျ။ အဆငျ့တှပေိုမြားသလို ပိုလညျး ရှုပျပါတယျ။ CSS3 မှာ border-radius property က ဒါတှကေို ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီ property တဈခုတညျးနဲ့ အဆငျပွသှေားပါတယျ။ CSS […]